Durian, mkpụrụ osisi kacha sie ike n’ụwa. Gịnị mere ọ na-esi isi isi. | Akụkọ Njem
Maria José Roldan | | Gastronomy, Asia njem
Mkpụrụ osisi bụ nri nke enweghị ike ịhapụ ịhapụ nri onye ọ bụla nọ n'ụwa. Mkpụrụ niile nwere nri na vitamin nke anyị chọrọ maka ahụike anyị na ka anyị rie ha, okike mara ihe ma lekwasị anya na ime ka nri ndị a dị mma na mpụga na ime, yabụ ha na-adọrọ mmasị anyị ma anyị na-eri na uto. .. iji rite uru na nri ya niile. Ma okike chefuru ime ka otu n’ime mkpụrụ ya niile mara mma, m na-ekwu maka Durian, mkpụrụ osisi kachasị sie ike n’ụwa.
Ọ bụrụ na mkpụrụ osisi na-esi isi, ihe ikpeazụ mmadụ chọrọ bụ rie ya, anyị agaghị achọ ịnwe ya n'akụkụ anyị!! Nri na-esi isi ma ọ bụ na-adịghị mma Anyị agaghị eri ya, n'ihi na ebumpụta ụwa anyị ga-agwa anyị na ọ dị egwu na ahụike anyị yana anyị nwere ike itinye onwe anyị na nsogbu.
1 Na-ere ahịa na ahịa nke Bangkok
2 Olee otú mkpụrụ osisi a si pụọ iche?
3 Ahụmahụ na durian
4 A machibidoro ya iwu n'ebe ụfọdụ
5 N'anya mkpụrụ asị
6 Kedu ihe na-esi isi ya
7 Reactionsfọdụ mmeghachi omume na durian
7.1 Mmeghachi omume ụmụaka
7.2 Nye nwa agbọghọ hụrụ n'anya
Na-ere ahịa na ahịa nke Bangkok
Ọ bụrụ na ị gafere ụfọdụ ahịa na Bangkok, Kuala Lumpur ma ọ bụ Singapore (n'etiti obodo ndị ọzọ), ị hụlakwa oke ísì nke anụmanụ nwụrụ anwụ (ọ bụ ezie na ụfọdụ na-ekwu na ọ na-esi isi karịa nsị), n'ezie ị gaferela n'akụkụ ebe a na-amị mkpụrụ ebe ha rere durian aha ọjọọ. Ọ bụ n'ezie aha ọjọọ nye ndị njem na-amaghị ama bụ ndị nwara anwa ịnwale ya, n'ihi na a maara ya nke ọma na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia niile dị ka eze mkpụrụ osisi.
Olee otú mkpụrụ osisi a si pụọ iche?
Describefọdụ na-akọwa ya dị ka: 'Ọ dị ka iri ure vanilla n'ụlọ mposi, a pụkwara ịkọwa isi ya dị ka nsị ezi, varnish na eyịm, ha nile jikọtara ya na sọks ọsụsọ.'
Durian na-eto na osisi a maara dị ka Durium ma ọ dị na Southeast Asia. ọ bụ ezie na ọ bụ mkpụrụ osisi nke ala Indonesia, Malaysia na Brunei. Ọ bụ mkpụrụ osisi dị mfe ịmata, ọ bụghị naanị n'ihi oke ísì ya, kamakwa n'ihi ọdịdị ya. Nke dị oke (ruo 30cm n'ogologo), ọ nwere ụdị elongated ma ọ bụ nke gbara gburugburu ma jiri ogwu kpuchie ya. N'ezie, aha ya sitere na Malay "duri", nke putara ogwu. Pulp nke durian bụ anụ ahụ na-acha edo edo ma na-acha nchara nchara, nke nwere ụtọ dị ụtọ, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe na-esi ike isi ike.
Ndị chọrọ iri ya ga-eme ya na-ejide ume ha n’ihi ihe na-esi ísì ọjọọ bụ ihe na-enweghị ike ịnagide ụfọdụ.
Ahụmahụ na durian
Otu onye ọrụ ibe a nwere ahụmahụ a peculiar mkpụrụ ma kọwaa ya n'ụzọ a:
“Oge izizi m nwere durian bụ n’ahịa dị na agbata obi ndị Hindu na Singapore. M gakwuuru otu ụlọ ahịa na-ere ya, ozugbo ahụ onye na-ere ahịa nyere m otu ibe ka m nwaa. Ihe na-ato ọchị bụ na onye na-ere ahịa kwuru na ọ na-amụmụ ọnụ ọchị mgbe ọ na-enye m mkpụrụ osisi ahụ, maara n'ezie ihe mmeghachi omume m ga-abụ mgbe m na-anwale ya. Ekwesịrị m ịgwa gị na ọ bụrụ na ị ga-ebu isi durian, ụtọ ahụ na-atọ ụtọ nke ukwuu.
Ekwenyesiri m ike na ọtụtụ ndị na-ere mkpụrụ osisi a na ndị isi ya na-anụ isi ya ga-achị ọchị na mmeghachi omume nke ndị ọzọ na-eche mkpụrụ osisi a ihu oge mbụ.
A machibidoro ya iwu n'ebe ụfọdụ
O siri ike na isi ya amachibidoro ya n'ọtụtụ ọdụ ụgbọelu, họtel na ụgbọ njem ọha, na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia niile. Obi abụọ adịghị ya na ahụmịhe pụrụ iche nke ị na-agaghị echefu, n'ihi na ozugbo ị nụrụ ísì durian maka oge mbụ, ị ga-echeta ya mgbe niile.
N'anya mkpụrụ asị
Mkpụrụ osisi a, ọbụlagodi na akpụkpọ ya adịghị mma ma meghee ya, nwere ajọ ísì nke na ọtụtụ mmadụ enweghị ike iburu ya. Nwere ike ịnụ ya n’ebe dị anya. Kama, enwere pere mpe mmadu huru uto na uto nkpuru osisi. Ọ dị ka mkpụrụ osisi ahụ nwere ike ime ka ụfọdụ ndị nwee ịhụnanya mana ịkpọasị ndị ọzọ asị.
O nwere ndị na-eri mkpụrụ sitere na mkpụrụ osisi ahụ, ma e nwekwara ndị na-ahọrọ iri ya esiri ya. Enwere ike iji ụlọ nke durian mee ka ekpomeekpo nke ọtụtụ nri ndịda ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, ọbụnakwa jiri ya mee swiit ọdịnala.
Enwekwara ndị na-eche oke ntinye onwe ha n’ebe mkpụrụ osisi a nọ n’ihi na a na-ejikwa ya maka ọgwụ ndị Asia, ebe ọ bụ na ọ na-eje ozi dị ka mgbochi mkpali, iji belata ahụ ọkụ na ọbụna dị ka aphrodisiac dị ike.
Kedu ihe na-esi isi ya
Mkpụrụ osisi a na-esi ezigbo isi n’ihi na ọ bụ ngwakọta kemịkalụ dị iche iche na - eme ka ọ na - esi ezigbo isi. A na-achọpụta usoro site na usoro kemịkal dị iche iche onye ọ bụla ọzọ (enwere ihe dị ka ogige ọgwụ 50 na mkpokọta).
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị na ọ dịghị ogige kemịkalụ dị iche iche n'otu n'otu nwere ihe ọ bụla metụtara mkpụrụ osisi a, mana na n'etiti ha niile, ha na-agwakọta isi dị iche iche. me ka ọ buru ihe-árú. Isi na-enye ya dị n’agbata nke ọhụrụ, mkpụrụ osisi, ọla, ọkụ, yabịrị ata, cheese blu, galik, mmanụ a honeyụ ... na onye ọ bụla na-esi isi ya na-agbakwunye ihe dị iche iche dabere na nghọta onye ọ bụla.
Ihe ndi a nile n’eme ka ndi mmadu nwee obi iru ala nye nkpuru a, ma obu ndi ozo ... na ha na-enwe mkparị na enweghị ike ịbịaru nso.
Reactionsfọdụ mmeghachi omume na durian
Mmeghachi omume ụmụaka
Na vidio a izizi m nyere gị ekele maka channel REACT YouTube, ị ga-enwe ike ihu ya na bekee, mana ọ dịghị mkpa ka ị mara asụsụ a iji mara etu ha si eme mkpụrụ a n'ihi na ihu na omume ha na-ekwu ha niile. Etinyela m vidio a mbụ n'ihi na ụmụaka kacha nwee obi eziokwu ị pụrụ ịhụ n'ime ha bụ eziokwu nke mkpụrụ osisi a pụrụ iche.
Nye nwa agbọghọ hụrụ n'anya
Na vidiyo nke abụọ a Achọrọ m igosi gị mmeghachi omume nke nwa agbọghọ nke hụrụ durian n'anya nke ukwuu ma nwee mmasị na ọdịdị ya, isi ya na uto ya ... o yiri ka ọ bụ mkpụrụ osisi na-atọ ụtọEgo ole ka ị ga-achọ ka ya? Achọtara m ya n'ihi ọwa AnaVegana YouTube.
Ichere na mkpụrụ osisi a ga-amasị gị nke ukwuu ma ọ bụ na ị ga-enwe mkparị na ya? Nwetụla mgbe ọ gbalịrị? Gwa anyị gbasara ahụmịhe gị!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Gastronomy » Durian, mkpụrụ osisi kacha sie ike n’ụwa
Aghọtaghị m mmeghachi omume nke ndị mmadụ, ọ bụrụ na site na mbido ọ nwere isi jọgburu onwe ya, mana ọ bụghị uto na-adịghị mma, n'ihi na "mmeghachi omume" na-eme mgbe ha na-eri ihe ọhụụ?
Akwụkwọ akụkọ manga dijo
Enwere m mmasị na mkpụrụ osisi niile ma ọ bụrụ na ọ dị oke ma ọ bụ dị obere karịa, amaara m na ọ bụrụ na ha enye m durian m ga-anabata iri ya n'echebaraghị ísì ọjọọ ya echiche
Zaghachi Manga Chronicler
M na-eche otu ihe ahụ. Ikekwe isi ya pụtara mgbe ọ na-atarịta ụta n'ime mkpụrụ osisi ahụ. Amaghị m.
Azụtala m n'ụlọ ahịa nri ọwụwa anyanwụ, ihe ụtọ na mkpụrụ osisi a, ha dịkwa mma ọ bụ ezie na ekwesịrị m ikweta na di m ajụ isusu m ọnụ ma ọ bụrụ na m rie ọgwụ ahụ sekọnd tupu hahahahahahaha ... ... ụtọ ahụ ka dịkwa na-atọ ụtọ.
Ahụrụ m isiokwu gị n'anya! Daalụ
Jolin Aghọtaghị m ihe ọ bụla m nọrọ na Thailand ruo otu ọnwa, ana m eri mkpụrụ osisi a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla n'ihi na ahụrụ m ya n'anya, uto ya dị mma ma na-esi isi mana ọ naghị anụ isi nsị ma ọ bụ ihe ọ bụla ị na-ekwu Aghọtaghị m ihe ọ bụla…. otu ihe ahụ bụ na n’oge a n’afọ, durian na-esi isi ka ihe ọ bụ, mkpụrụ ya na-atọ ụtọ ma enwere m nnukwu ihu ọma….
onye na-eri nri dijo
DELICIOUS !!. Mgbe obula m jere Southeast Asia, enwere m obi uto uto ya (vlr). Ihe na-adịghị mma bụ na a na-efe ya naanị n'ụlọ ahịa n'okporo ámá, n'ihi ihe doro anya. Oge izizi m nọ na Malaysia wee zụta, etinye m na họtel ahụ, isi m apụtaghị ruo mgbe anyị lara. Mgbe e mesịrị, anyị chọpụtara na a machibidoro ya iwu ịkpọbata ya na họtel.
Ana m asọpụrụ nke ukwuu onye ọ bụla masịrị ya I mana m gbalịrị ya mgbe m gara Thailand ma na mbido mbụ m ga-asị na ọ nyere m mpi nke ọ fọrọ nke nta ka m gbụpụ…. O nwere "uto" puru iche nke ndi njem nleta siri ike (ma ewezuga isi aru, nke putara ihe, ma odighi onye gha agọnariri ya) ... obu ezie na onwere ndi choputara na obu ihe uto, ihe uto, enwere agba! !
Ọ na-esiri m ike ikwere na onye nwarala durian na-ekwu na ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ọ na-esi isi jọgburu onwe ya ma na-atọ ụtọ karịa ka ọ na-esi.
Zaghachi Francisco Méndez
Agbanyeghị na ha nwere ike iyi otu, nkịta a si Nayarit dị ezigbo ụtọ, ọ naghị esi isi ma ana m eri ya na Monterrey, Mexico
Na eziokwu, abughi m onye Eshia ma ọ bụ na m gara Asia, mkpụrụ osisi a mgbe m bụ nwata nne nne m mgbe ụfọdụ kwadebere m ihe mba m na-akpọ «ncha ntutu, ahụghị m ya ọzọ n’ihi na Dominican Republic ọ bụghị ezigbo nkịtị ma ọ bụ Mkpụrụ a maara nke ọma na mba m anyị na-akpọ ya Ekwenyere m na «Jaca: nye m n'onwe m na karịsịa mgbe mkpụrụ osisi ahụ chara acha, ahụrụ m ya n'anya ma ọ nweghị metụtara yabasị ma ọ bụ nsị ọ bụla, ana m asọpụrụ echiche mana m chere na echiche na-emetụta onye na-enye ha.
Ọ na-atọ m ụtọ isi ya na ụtọ ya na-adịkarị ka mkpụrụ osisi strawberry na ọ na-atọ ka unere. N'ihi ísìsì ya, oke na uto ya, mkpụrụ osisi na-eweta esemokwu, nke ahụ bụ naanị eziokwu m kwenyere.
Enwere m mmasị na mkpụrụ osisi a ma ọ na-atọ m ụtọ iri ha, ọtụtụ beces mgbe m gbalịrị ịpụ n'èzí ụlọ n'èzí iji lee mbara igwe ma too Chineke m maka ịbịpụta na -emepụta mkpụrụ osisi a nke ọma na ọtụtụ beces mgbe iri ya na-akpata m akwa ochi na obi uto.
Onye agọziri agọzi ka Chineke m bụ maka mkpụrụ osisi a, ya na painia, mkpụrụ osisi na soursop bụ ọkacha mmasị m kemgbe m bụ nwata.
Ihe na-eme bụ na Jaca abụghị otu ndị Durián n'agbanyeghị na ha si n'otu klaasị. N'aka nke ọzọ, Jaca na-atọ ụtọ ma na-esi isi. Ọ dị m ka ọtụtụ na-emegharị mkpụrụ osisi abụọ a na ọ bụ ya mere ha ji ekwu na ọ na-atọ ụtọ mgbe ihe ha detụrụ ire abụghị akụrụngwa kama ọ bụ ụdị ọzọ.